Sawiro:- Banaanbax lagu eedeynayo DfS laguna taagryay Axmed Madoobe oo kadhacay Kismaayo. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSawiro:- Banaanbax lagu eedeynayo DfS laguna taagryay Axmed Madoobe oo kadhacay Kismaayo.
Sawiro:- Banaanbax lagu eedeynayo DfS laguna taagryay Axmed Madoobe oo kadhacay Kismaayo.
July 31, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 0
Bannaan bax ballaaran oo looga soo horjeedo faragalinta qaawan ee DFS ku heyso arrimaha Jubbaland gaar ahaan doorashooyinka qabsoomi doona ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo.
Kumanaan dadweyne oo ka kala yimid xaafadaha Magaalada Kismaayo ayaa waxa ay socod dheer ku soo mareen wadada halbowlaha u ah magaalada waxa ayna wateen boorar ay ku xardhanyihiin qoraallo ka turjumaya midnimada Jubbaland.
Bannaan baxan oo ahaa mid nabadeed ayaa baaq loogu diray Odayaasha dhaqanka,Siyaasiyiinta iyo Shacabweynaha Jubbaland sidii ay uga wada qayb qaadan lahaayeen ilaalinta nabad galyada iyo xasilooniada deegaanada Jubbaland.
DAAWO VIDEO:Iidle Yare Qosolkii Aduunka “Hodan cabdiraxman Ayaan Bad baadiyey Sheeko”
Kheyre oo markale xaliyay tabashadii hogaanka Ahlusunna “Ciidamo la geeynayo dhuusamareeb”.